Shiinaha Shaohong marawaxadaha hawada iibiyaha ugu fiican iibiyaha, 13.4QT Electric Hot Foornada Saliida yar, Turbo Digital panel oo leh 11 Horudhac, Xusuusin Preheat & Shake, Nonstick Basket AX-767MH saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Shao Hong
Shaohong hawo qaadeyaasha heshiiska ugu wanaagsan iibiyaha ra'iisul, 13.4QT Electric Hot Foornada Saliida wax karsan, Turbo Digital panel oo leh 11 Horudhac, Xusuusin Preheat & Shake, Nonstick Basket AX-767MH
Bandhig Wanaagsan oo leh adeegsi hore oo fudud. Intaa waxaa dheer, qalabka wax lagu kala iibsado ee ugu fiican iibiyaha ra'iisul-wasaaraha ayaa u oggolaanaya inuu si fudud ugu habboon karo miiskaaga.
Mashiinnada hawada ugu fiican ee iibiyaha ugu sarreeya, waxay isticmaalaan illaa 85% dufan ka yar cuntada dhaqan ahaan qoto dheer la shiilay iyadoo la ilaalinayo isla dhadhanka macaan, taas oo ka dhigaysa hadiyadda ugu fiican ee qoyska ama asxaabta.
Marka loo barbardhigo dambiil wareega 4-geesood ah ama xitaa mid ka yar, Shaohong hareeraha hawada iibiyaha ugu fiican iibka ra'iisul heshiis wuxuu ku habboonaan karaa 5 lbs-6 lbs digaag dhan, halka dambiil yar oo wareegsan uusan awoodi karin. Iibso cabbirkaan XL 5.8-rubuc ah, wuxuu ugu adeegaa qoyskaaga ugu yaraan 3-5 qof.
11-Taabasho hal-taabasho ah: Steak, digaaga, cuntada badda, Shrimp, Bacon, Cunto barafaysan, Frieska Faransiiska, Khudaarta, Qudaarta xididka ah, rootiga, iyo macmacaanka. Kaliya dooro hore-u-dhiggaaga oo leh 1 tuubbo oo sahlan shaashadda oo waxaad diyaar u tahay inaad karsato. Waxa kale oo aad dejin kartaa kuleylka / waqtiga karinta.
Dambiisha dahaarka leh ee nonstick ee dahaarka leh waa saxan-dhaqe ammaan ah, oo aan PFOA lahayn & BPA-la'aan. Mashiinka hawada.
Wuxuu la yimaadaa 100 asal ah, raaxo macaan & fudud oo raashin kasta ah. Soo ogow sida saameynteena tirada badan ay ugu karsadaan cunnadooda sharoobada hawada shaohong ee warbaahinta bulshada, sidoo kale cuntada sida joogtada ah iyo casharrada fiidiyowyada ee bulshadayada.
Waqtiga karinta ayaa ka dhakhso badan foornada caadiga ah, laakiin leh natiijooyin jilicsan oo dhadhan fiican leh. Waxay sidoo kale leedahay shaqo xasuusin ruxitaan ah. Kuleyli qeybta kahor intaadan kudarin walxahaaga si aad uhesho natiijooyinka ugufiican.
Iibsashadaadu waxay ku timid caawimaad Kooxdayada Taageerada Macaamiisha ee waxtarka leh. Iyo shaashadeena hawada Shaohong ee iibiyaha ugu fiican iibiyaha, ayaa ku siin kara danabyo kala duwan xulashadaada.
U hoggaansanaanta IEC A-13 heerka nabadgelyada.
Laser muddo dheer soconaya oo daabacan koontaroolka.
1 × 20ft Weelka: 688pcs
1 × 40ft Weelka: 1420pcs
1 × 40HQ Weelka: 1620pcs
Hore: Shaohong hawo hawo qaade ah oo foornada wax lagu kala qaado, 10-in-1 Hawo Fryer Oven, 13.4 Quart air fryer rack for oven convection, 1300W Hawo Weyn Balaaran, Convection Toaster Oven with Rotisserie Dehydrator AX-737MH
Xiga: Shaohong power air fryer 360, 2020 Model, Edition Gaarka ah, 9-in-1 Multi Cooker, Buugga Cuntada Bilaashka ah oo lagu daray, Muuqaalka Dijitaalka ah, Naqshadeynta Slick, Ultra Deggan, 12 Barnaamijyada Hordhaca ah, Oo leh Dammaanad 1 Sano Gaara ah, Sida Lagu Arkay Showga TV AX -777MH
kululeeyaha kululaynta qalabka wax lagu kariyo UNIQUE! Emer ...